KITRA – FIFANINANANA AFRIKANA :: Mety hifandona amin’ny ekipan’ i Dax ny Elgeco Plus raha tafita - ewa.mg
Foot - News - Sport - KITRA – FIFANINANANA AFRIKANA :: Mety hifandona amin’ny ekipan’ i Dax ny Elgeco Plus raha tafita
Tontosa, omaly, ny antsapaka ho an’ireo klioba mandray anjara amin’ny fifaninanana kaontinantaly aty Afrika dia ny fiadiana ny «Amboaran’ny CAF» sy ny «Caf Champions League». Klioba iray avy any Guinée Equatoriale, Depor­tivo Unidad, no hifanandrina amin’ny ekipan’ny Elgeco Plus, tompon’ny amboaran’i Madagasikara, eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaonfederasiona.
Raha tafita amin’izany izy ireo ka tafavoaka ho mpandresy eo anatrehan’ny Zimamoto avy any Zanzibar ny Kaizer Chiefs, dia hifanandrina eo amin’ny 1 /16-n-dalana ny Elgeco Plus sy ity ekipa hilalaovan’i Arohasina Andriamirado na i Dax avy atsy Afrika Atsimo ity. Hotan­terahina amin’ny 27 na 28 novambra ho avy izao ny lalao mandroso, izay hihaonan’ny Elgeco Plus amin’ny klioba avy any Guinée Equa­toriale, ka isika no mpa­mpiantrano. Hanafika any an-toerana izy ireo, amin’ny 4 na 5 desambra ho avy izao.
Klioba avy any Zimbaboe, FC Platinium, kosa no hifa­nandrina amin’ny Cnaps Sport, tompondakan’i Mada­gasikara, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika na ny “Caf Champions League”. Hampiantrano ny lalao mandroso ihany koa ny Cnaps Sport amin’ny 27 na 28 novambra ary hiatrika ny lalao miverina any an-tanin’ olona amin’ny 4 na 5 desambra.
Samy mbola tsy zatra miatrika fifaninanana kaontinantaly na ny FC Platinium, amin’izao anarany izao, na ny Deportivo Unidad avy ao Malabo. Na izany aza anefa dia tombony ho azy ireo ny fampiantranoana ny lalao miverina. Raha samy tafita ireo solontenantsika ireo dia samy hampiantrano ny lalao miverina avokoa. Izay tafavoaka amin’ny Desportivo Primeiro de Agosto avy any Angola sy ny AS Otoho avy any amin’ny repoblika demokratikan’i Congo no hifanandrina amin’ny Cnaps Sport. Izay mandresy amin’ny Kaizer Chiefs avy any Afrika Atsimo sy Al Ittihad avy any Libia no hihaona amin’ny Elgeco Plus.
L’article KITRA – FIFANINANANA AFRIKANA :: Mety hifandona amin’ny ekipan’ i Dax ny Elgeco Plus raha tafita est apparu en premier sur AoRaha.
Ligue des Champions – Voka-dalao 27 novembre 2018 Roma vs Real Madrid
AFROBASKET 3X3 :: Lavo teo amin’ny ampahefa-dalana ny Malagasy
Nihintsana teo amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana ny ekipam-pirenena Malagasy, taranja basket-ball lalaovin’olona telo, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika notanterahina tany Lomé Togo, ny faran’ny herinandro lasa teo. Nion­drika tamin’ny isa 16 noho 9, teo anatrehan’ny Repoblika demôkratikan’i Congo, ry Fabrice, Livio, Ricky ary Arnold, teo amin’io dingana io, ka tsy nahafahany niatrika ny dingan’ny manasa-dalana. Teo amin’ny lalaom-bondrona dia nitana ny laharana voalohany tao amin’ny vondrona D i Madagasikara. Fandresena iray sy faharesena iray no vokatra azon’izy ireo tamin’izany. Niondrika teo anatrehan’i Burkina Faso, tamin’ny alalan’ny isa 13 noho 11 ny Malagasy, teo amin’ny lalao voalohany. Montsan-dry Fabrice, tamin’ny isa 21 noho 10, kosa ny ekipan’i Togo, mpampiantrano, teo amin’ny lalao faharoa. Tsy tratra ny tanjona napetrak’ireo mpilalao tamin’ity andiany faharoa ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ity. Nikasa ny haka vokatra tsaratsara kokoa noho ny tamin’ny taon-dasa, izay nihintsanantsika teo amin’ny manasa-dalana, izy ireo saingy teo amin’ny ampahefa-dalana dia efa tapitra sahady ny lalao. Isan’ireo nanakorontana ny fanomanan-tenan’ireto mpilalao ireto ny tsy nanomezan’ny Zandari­mariam-pirenena an’i Elly Randriampionona, izay isan’ireo mpilalao mendrika aty Afrika. Tamin’ny fifaninanam-paritra, izay noraisintsika teto Madagasikara, ka nahazoana ny tapakila dia isan’ireo namiratra ity mpilalao ity. Na izany aza anefa dia niezaka ny nanao izay tratran’ny heriny ry Fabrice sy ny namany, tamin’ity fifaninanana kaontinantaly ity. L’article AFROBASKET 3X3 :: Lavo teo amin’ny ampahefa-dalana ny Malagasy est apparu en premier sur AoRaha.
Hitana ny sain’ny rehetra, amin’ity faran’ny herinandro ity, ny lalao baolina kitra, hiadiana ny “Can 2019”. Hampiantrano an’i Soudan, amin’ity, ny Barea de Madagascar. Mbola vonona hanaporofo ny maha andrarezina azy ny ekipam-pirenena malagasy. Hotanterahina, rahampitso eny amin’ny kianja Complexe Vontovorona, ny lalao hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy i Soudan. Fihaonana, tafiditra amin’ny andro fahadimy, fifanintsanana isam-bondrona, hiadian-toerana amin’ny “Can 2019”. Marina fa efa tafita any Kameronina ny Barea de Madagascar, saingy hanamafy ny toerana efa misy azy. Lalao miverina eo amin’ny roa tonta ity hatao ity. Hanala vela amin’ny Barea ry zareo Sodaney, izay efa resin’ny Malagasy, tany amin’ny kianja filalaovany, tamin’ny isa mazava 3 no ho 1. Efa tsy manana herijika intsony ry zareo Sodaney fa lalao hiarovan-boninahitra fotsiny sisa hataony. Nanambara i Faneva Ima, kapitenin’ny Barea de Madagascar, fa tsy manambany ity fihaonana amin’i Soudan ity mihitsy ry zalahy fa tena mandray izany ho fihaonana lehibe. Mbola vonona indray ry zalahy hanolotra fandresena ho an’ireo mpijery. Tsiahivina fa efa tonga eto an-toerana avokoa ireo mpilalao mpila ravinahitra avy any Frantsa sy avy any Thaillande ary avy any Egypta, nantsoin’i Nicolas Dupui, mpanazatra malagasy. Izay mendrika no ho tafiditra “18 ihany ny azo atao ao anaty lisitra, amin’io lalao io, noho izany, izay mendrika no tsy maintsy ho tafiditra ao anatin’izany. Tsy hijerena hoe mpila ravinahitra na avy eto an-toerana io satria ny voninahitr’i Madagasikara ny arovana”, hoy i Nicolas Dupuis. Tetsy ankilany, efa tonga eto Madagasikara ny alakamisy lasa teo ny mpilalaon’i Soudan. Nilaza ry zalahy fa tsy hitsangantsangana ny hahatongavany eto Madagasikara fa tena hilalao ary vonona ny handresy ny Barea. Efa nitsapa ny kianjan’i Vontovorona izy ireo, omaly zoma, ary mbola manohy ny fanomanan-tenany eo amin’izany fotodrafitrasa izany, amin’ity asabotsy ity. Miantso ireo mpijery ho tonga marobe hanohana azy ireo hatramin’ny farany ireo mpilalaon’ny Barea. Miangavy ry zalahy mba tsy hiala aloha izy ireo fa hiandry ny kiririoka hatramin’ny farany, hiaraka hiaina ny fandresena homen’ireo mpilalao azy ireo, amin’ity fihaonana farany, atao eto Madagasikara, ity. Tsiahivina fa ny lalao hikatrohana amin’ny Liona senegaley, ny volana marsa 2019, ny mamarana ny fifanintsanana, hiadian-toerana amin’ity “Can 2019” ity. Tompondaka
Manazava ny tsy fahafahany nanohitra an’i Giannis Antetokounmpo ny Warriors
Satria tsy nanao i Draymond Green, dia i Jordan Bell no nandova ny asa goavana ny hanomboka ny lalao hitazona an’i Giannis Antetokounmpo. Vao efatra minitra ny lalao dia efa faute roa sahady no azony, teny amin’ny seza sisa no nijerevany an’ilay Grika nilalao an’ireo namany Damian Jones sy Kevon Looney. Ka teo aorian’ny fialan-tsasatra izy vao nanana fahafahana ny hihazona an’i Giannis. Tsy nahavita izany anefa izy. « Tena sarotra ny miaro tena amin’izy ireo fa tsy maintsy mitady fomba hanakanana an’i Giannis hanafika ny panier, sady tsy mila mandefa azy eo amin’ny lancer Franc. » hoy i Steve Kerr talohan’ny lalao. Ny vokany ? 24 points, ny ankamaroany tao amin’ny raquette avokoa ary lancers-francs 11… « Tena mafy izy. Lava be, matanjaka… ny tsy manao faute eo aminy dia… sarotra » hoy i Jordan Bell sady nisento. « Tena sarotra tokoa satria izy tena manana tanjaka tokoa. Rehefa mandona anao izy dia tsy maintsy matahotra ianao. Dia avy eo anefa dia efa tara loatra. » Giannis Antetokounmpo dia hamono ny 19 amin’ireo 24 points-ny tamin’ny fizaram-potoana voalohany mandrapahatongan’ny fotoana be loatra ny faute-ny. «Tena mission impossible » Ho an’i Kevin Durant, izay nifanehitra matetika tamin’i Khris Middleton, mifanehatra amin’i Giannis Antetokounmpo amin ‘ny poste 4 dia tena nofy ratsy tokoa satria ireo Pivot mifanehatra aminy dia mavesatra loatra, na miadana loatra, na tsy ampy tanjaka ny hanakana». « Tena manahirana izy, indrindra indrindra raha pivot no manao defense an’azy » hoy izy. « sarotra ny manakana azy indrindra rehefa mbola tsy tafapetraka tsara ny defense. Tena matanjaka kokoa noho ireo pivot mifanehitra azy izy ka afaka ny mahatratra ny panier tsotsotra kokoa. Ary raha maka bahana izy dia tena mission impossible. »